Fahavaratra 2021: ny akanjo milomano sy bikini tadiavinao hitafy | Bezzia
Fahavaratra 2021: ny akanjo fitondra milomano sy bikini tadiavinao
Efa akaiky ny fahavaratra ary amin'ity taona iainantsika ity dia manantena antsika hihoatra noho ny hatramin'izay. Efa manonofy hilomano eny amoron-dranomasina isika, hatory amin'ny fasika mafana, cocktail an-tanana mipetraka eo amoron'ny kamory ... ary, mazava ho azy, akanjo ba vaovao.
Ny iray amin'ireo antony mamaritra rehefa misafidy akanjo ba dia mahatsapa tsara izany nefa tsy manao ambanin-javatra fampiononanaAry tsy midika izany fa tokony hiala amin'ny endrika tsara tarehy sy ny fironana farany isika. Misy safidy mifanaraka amin'ny fepetra takiana sy izay antenaina rehetra angatahinay amin'ny akanjo fitondra milomano hahomby mandritra ny fahavaratra rehetra. Ary, hanaporofoana izany, LuisaViaRome manolotra ny tsara indrindra amin'ny lohataona-fahavaratra 2021 mba hankafizanao ny masoandro amin'ny fomba.
1 Retro Inspiration
2 Fanapahana tsy simetrika
3 Ny panty avo
4 Ny frills
5 Ny mangatsiaka amin'ny mofomamy
Mazava fa ny fisafidianana akanjo ba bikini na akanjo iray dia tena manokana: ianao irery ihany no mahalala izay mety amin'ny vatanao, fa misy modely izay manome lanja ny karazana silhouette, toy ny akanjo milomano iray nahazo aingam-panahy manolotra. Bottega veneta na Max Mara.
Mono na bicolor modely, misy tady tokana, misy roa ary misy tanany aza. Manalava ny torso an'ireo fohy kokoa izy ireo, manasongadina ny andilan'ireo avo kokoa, manarona ny tsy fahalavorariana (raha misy) ny kibony sy ny valahany. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mitafy azy ireo ho toy ny bodysuit amin'ny pataloha tianao indrindra, araka ny fanao amin'ny fanao, afaka mangataka bebe kokoa ve ianao?
Fanapahana tsy simetrika
Ny marika italianina The Attico, noforonin'ny duo an'ny kintan-dàlana, dia manaitra anay amin'ny sasany modely iray manontolo miaraka amin'ny fanapahana asymméric izay manasongadina ny tarehimarika ary hisarika ny maso rehetra amin'ny maha-izy azy, na tsotra izy ireo na modely. Nomeny volo ihany koa ny bikini, nanodikodina ara-bakiteny ny lamba izy mba hamoronana fatotra sy fehin-kibo izay manorona ny tendany eo an-tampony sy ny valahany eo ambany.
Ilay marika Self Portrait izay notadiavina, izay nandresy antsika tamin'ny akanjony vita amin'ny dantelina, dia manatevin-daharana an'io fironana io ihany koa amin'ny fanomezana ny bikini misy akanjo lava sy akanjo milomano tokana iray refy vaovao.
Ny panty avo
Mazava fa ny andilana avo dia tonga vanim-potoana maro lasa izay hijanonana. Ny panty avo atambatra tanteraka amin'ny karazana top rehetra: fanatanjahan-tena, telozoro, bandeau na koa miaraka amin'ilay t-shirt voapaika hijerena surfer chic. Aza adino ny panties navoakan'i Verdelimon sy Isabel Marant Étoile na, raha tianao ny fahatsorana, ny maodelin'ny Eres, Tsy isalasalana; Mahatsiaro ho tsara izy ireo!
Ireo flyers dia mitovy amin'ny hafaliana sy ny maha-vehivavy, ary ny orinasan-damaody avo lenta dia nampiditra azy ireo tamin'ny fanangonana akanjo lava farany nataony. Raiki-pitia amin'ireo bikini avy amin'i Johanna Ortiz sy ireo akanjo milomano nomen'i Zimmermann, izay nahavita nitatitra ny fotony avy tany amin'ny catwalk nankany amoron-dranomasina.
Ny mangatsiaka amin'ny mofomamy
Mazava be izahay fa zava-dehibe ny antsipiriany ary ny fahavaratra dia tsy feno raha tsy misy ny kojakoja ilaina. Araho ary ny tolo-kevitray mba ho lavorary na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana.
Raha iray amin'ireo izay tia ny fijery amoron-dranomasina mahazatra ianao dia tsy afaka tsy hahita an'io akanjo sy kimono avy amin'ny lemamason'ny marika amam-bika sy maharitra, tonga lafatra amin'ny iray amin'ireo harona mololo maniry sy harona ankafizin'ny vanim-potoana indrindra ary nosoniavin'i Loewe.
Raha jerena sporty ampio amin'ny akanjo fitondra akanjo misy anao a Satroka baseball logo Balenciaga, ny kitapo hoditra farany sy tadiaviny hitondrana ny telefaona sy t-shirt lava na akanjo mafana Valentino vaovao hanakaikezana ny bar amoron-dranomasina rehefa manomboka mangatsiatsiaka.
Raha tianao ny safidy malina sy kanto, atambaro ilay bikini mainty navoakanao, ary manantena aho fa hiaraka aminao vanim-potoana hafa, miaraka amin'ny sasany solomaso mainty avy amin'i Saint Laurent ary pataloha lurex semi mangarahara toa an'ireo Osère Swimwear.
Izao dia tsy maintsy misafidy ny toerana alehanao ianao mandritra ity fialantsasatra ity, manangona valizy miaraka amin'ny fironana kintana an'ny lohataona fahavaratra 2021 mihinana kokoa ary mankafy!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Fahavaratra 2021: ny akanjo fitondra milomano sy bikini tadiavinao
Tombontsoa azo avy amin'ny tarika elastika